Madaxweyne Saalax oo sheegay in uu doonayo in uu xilka isaga dago maalmo gudahood – SBC
Madaxweyne Saalax oo sheegay in uu doonayo in uu xilka isaga dago maalmo gudahood
Sanca:-Khudbad uu baahiyey televison-ka qarankaYemenayaa Madaxweynaha dalka Yemen Cali C/della Saalax ku sheegay in uu doonayo in uu xilka isaga dego maalmaha soo socda.
Madaxweyne Saalax ayaa yiri” waan diidayaa xukunka waana sii wadayaa diidamadeeda waana baneenayaa xukunka maalmaha soo socda.
Saalax ayaa intaas ku daray in ay jiraan rag haya xukunka hadii ay ahaan lahaayeen rayid ama milatari, taasi oo uu ula jeeday in ay suurtagal tahay in uu madaxweyne Saalax uu soo caleemo saaro ciddii xukunka kala wareegi lahayd oo aan ahayn mucaaradkiisa.
Saalax ayaa xukunka hayey muddo 33 sano wuxuuna diidan yahay in uu ka tanaasulo inkastoo ay socdaan cabashooyin tan iyo bishii January taasi oo sababtay in xilligan ay u muuqato Yemen in ay tahay dal aan nidaam kajirin oo kale.
Hadalka madaxweyne Saalax ayaa ku soo beegmaya xilli wasiir kuxigeenka warfaafinta xukuumadda Yemen ninka lagu magacaabo Cabdow Maxed Al-janadi uu sheegay in xukuumadda ay sugayso in amaanka dib ugu soo celiso magaalo madaxda dalkaas Sanca, si loo soo afjaro wadahadalada lagu doonayo in waqti loo sameeyo doorashooyin madaxtinimo iyo wareejinta maamulka si nabad ah.